Nehemiya 11 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
11 Ke kaloku iinkosana+ zabantu zazihlala eYerusalem;+ kodwa ke abanye abantu, babesenza amaqashiso+ ukuze bangenise abe mnye kwabalishumi ukuba aye kuhlala eYerusalem isixeko esingcwele,+ nesithoba senye inxalenye kwezinye izixeko. 2 Ngapha koko, abantu babasikelela+ bonke abantu abazinikela ngokuzithandela+ ukuba bahlale eYerusalem. 3 Yaye ezi ziintloko zamaphondo+ ezazihlala eYerusalem;+ kodwa kwizixeko zakwaYuda kwakuhlala, ngamnye kwilifa lakhe, kwizixeko zabo,+ uSirayeli,+ ababingeleli+ nabaLevi,+ namaNethini+ noonyana babakhonzi bakaSolomon.+ 4 EYerusalem kwakuhlala abanye boonyana bakaYuda nabanye oonyana bakaBhenjamin.+ Koonyana bakaYuda yayinguAtaya unyana kaUziya unyana kaZekariya unyana ka-Amariya unyana kaShefatiya unyana kaMahalaleli wakoonyana bakaPeretse;+ 5 noMahaseya unyana kaBharuki unyana kaKolihoze unyana kaHazaya unyana ka-Adaya unyana kaYoyaribhe unyana kaZekariya unyana womShela. 6 Bonke oonyana bakaPeretse ababehlala eYerusalem babengamakhulu amane anamashumi amathandathu anesibhozo, amadoda afanelekayo. 7 Aba yayingoonyana bakaBhenjamin:+ USalu unyana kaMeshulam+ unyana kaYowedi unyana kaPedaya unyana kaKolaya unyana kaMahaseya unyana kaItiyeli unyana kaYeshaya; 8 yaye emva kwakhe yayinguGabhayi noSalayi, amakhulu asithoba anamashumi mabini anesibhozo; 9 noYoweli unyana kaZikri, umveleli wabo, noYuda unyana kaHasenuwa engowesibini kwabo babevelela isixeko. 10 Ababingeleli: NguYedaya unyana kaYoyaribhe,+ uYakin,+ 11 uSeraya unyana kaHilekiya unyana kaMeshulam+ unyana kaTsadoki+ unyana kaMerayoti unyana ka-Ahitubhi,+ inkokeli yendlu yoTHIXO oyinyaniso; 12 nabazalwana babo abenzi bomsebenzi wendlu,+ bengamakhulu asibhozo anamashumi mabini anesibini; noAdaya unyana kaYeroham+ unyana kaPelaliya unyana ka-Amtsi unyana kaZekariya unyana kaPashure+ unyana kaMalekiya,+ 13 nabazalwana bakhe, iintloko zezindlu zooyise,+ bengamakhulu amabini anamashumi mane anesibini, noAmashesayi unyana ka-Azareli unyana ka-Ahazayi unyana kaMeshilemoti unyana kaImere, 14 nabazalwana babo, amadoda anamandla nanobukroti,+ belikhulu elinamashumi amabini anesibhozo, yaye babenomveleli,+ uZabhediyeli unyana wabakhulu. 15 AbaLevi:+ NguShemaya unyana kaHashubhi unyana ka-Azerikam unyana kaHashabhiya+ unyana kaBhuni, 16 noShabhetayi+ noYozabhadi,+ beentloko zabaLevi, bongamele umsebenzi wangaphandle wendlu yoTHIXO oyinyaniso; 17 noMataniya,+ unyana kaMika unyana kaZabhedi unyana ka-Asafu,+ umbhexeshi wezokudumisa, owayebonga+ emthandazweni,+ yaye uBhakebhukiya wayengowesibini kubazalwana bakhe, noAbheda unyana kaShamuwa unyana kaGalali+ unyana kaYedutun.+ 18 Bonke abaLevi ababekwisixeko esingcwele+ babengamakhulu amabini amashumi asibhozo anesine. 19 Abagcini-masango+ yayinguAkubhi, uTalemoni+ nabazalwana babo ababelinda emasangweni,+ ikhulu elinamashumi asixhenxe anesibini. 20 Amanye amaSirayeli, ababingeleli nabaLevi, babekuzo zonke ezinye izixeko zakwaYuda, ngamnye kwilifa lakhe.+ 21 Kwaye amaNethini+ ayehlala eOfeli;+ yaye uTsiha noGishpa babongamele amaNethini. 22 Umveleli+ wabaLevi eYerusalem yayingu-Uzi unyana kaBhani unyana kaHashabhiya unyana kaMataniya+ unyana kaMikha+ woonyana baka-Asafu,+ iimvumi,+ ngokuphathelele umsebenzi wendlu yoTHIXO oyinyaniso. 23 Kuba kwakukho umyalelo kakumkani ngenxa yabo,+ yaye kwakukho ilungiselelo elimisiweyo leemvumi ngokweemfuno zemini nganye.+ 24 Yaye uPetahiya unyana kaMeshezabheli woonyana bakaZera unyana kaYuda wayesecaleni likakumkani kuyo yonke imibandela yabantu. 25 Kwaye ngokubhekisele kwimizi+ eyayikumhlaba wabo, kwakukho abanye boonyana bakaYuda ababehlala eKiriyati-arbha+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo naseDibhon nakwiidolophu eziphantsi kwayo naseYekabhetseli+ nemizi yayo, 26 naseYeshuwa naseMolada+ naseBhete-pelete+ 27 naseHatsare-shuwali+ naseBher-shebha+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo 28 naseTsikelage+ naseMekona nakwiidolophu eziphantsi kwayo 29 nase-En-rimon+ naseTsora+ naseYarmuti,+ 30 eZanowa,+ eAdulam+ nemizi yazo, iLakishe+ nemihlaba yayo, iAzeka+ needolophu eziphantsi kwayo. Kwaye bemisa iinkampu ukususela eBher-shebha ukuya kufikelela kwintlambo yaseHinom.+ 31 Yaye oonyana bakaBhenjamin babethabathela eGebha,+ eMikimashe+ naseAya+ naseBheteli+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo, 32 eAnatoti,+ eNobhi,+ eAnaniya, 33 eHatsore, eRama,+ eGitayim,+ 34 eHadidi, eTsebhoyim, eNebhalati, 35 eLodi+ naseOno,+ intlambo yeengcibi. 36 NakubaLevi uBhenjamin wayenezahlulo zakwaYuda.